ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်
Posted by မောင်ဆန်း on Sep 9, 2011 in Politics, Issues | 20 comments
ဘယ်သူ ဘယ်နေရာမှာ ရှိလဲ
အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရသစ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အရင်တုန်းက လျှောက်လှမ်းပုံနဲ့ မတူတဲ့ လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို သွားနေပါတယ် ဒီအပေါ်မှာ အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေရှိသလို မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေလဲ ရှိပါတယ် ဒါကပုံမှန်ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံမှုရတဲ့ နိုင်ငံ၊ ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး ထောက်ခံမှုများခြင်း နဲခြင်းပဲရှိပါမယ် ရေရှည်မှာတော့ လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံး ရတဲ့ အစိုးရတွေပဲ အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မှာပါ ၊ မြန်မာပြည်မှာလဲ လက်ရှိအစိုးရက လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လျှောက်ပြတယ် ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ အခြေအနေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တယ်လို့ မြင်လာပြီး လူထုရဲ့ တခဲနက် ထောက်ခံမှုကို ရလာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ ပြောင်းပြန် လူထုထောက်ခံတဲ့ အစိုးသစ်တက်လာတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အခု လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲ နိုင်ငံရေးကိစ္စလို့ ပြောရင် မစားကောင်းတဲ့သစ်သီးလို ထိကိုင်ဘို့ လက်တွန့်နေကြပါသေးတယ် (ကျွန်တော်လဲ အပါပေါ့ :D) ဒါပေမဲ့ အရင်ထက် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုတွေ မီဒီယာမှာ မြင်တွေ့လာရတာတော့ ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ မြင်ပါတယ် အခုခေတ်တချို့လူငယ်တွေ ကိုမေးကြည့်ရင် အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဘယ်သူတွေပါလဲ ၊ ဘယ်သူကဘာတာဝန်ယူထားလဲ၊ လွှတ်တော်ဘယ်နှစ်ရပ်ရှိသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေမေးရင် မသိဘူး၊စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ဖြေမဲ့သူက အများစုပါ ကျွန်တော့် အမြင် ကတော့ ကိုယ်နေတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေဟာ မဖြစ်မနေ သိသင့်တယ် စိတ်ဝင်စားသင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ် ဒီလိုကိစ္စတွေမှ မသိပဲ စိတ်မ၀င်စားပဲ တက်လာတဲ့ အစိုးရကို မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ကြိုက်တယ် ဒါမှမဟုတ် မကြိုက်ဘူး ဆန့်ကျင်တယ် လို့ အော်နေရင် သဘာဝ မကျဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောတာက အစိုးရတစ်ခုကို ကြိုက်ပါ၊ မကြိုက်နဲ့ လို့ တိုက်တွန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ကြိုက်ရင် ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင်လဲ ဘာကြောင့် မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အချက် ကို ကိုယ်တိုင်နားလည်လက်ခံပြီး ဆုံးဖြတ်ကြစေချင်တာပါ …
ကျွန်တော်တို့ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်မှာ တာဝန်ယူထားသူတွေရဲ့ ရာထူးအင်္ဂါစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လိုက်ရှာကြည့်ပေမဲ့ အတိအကျတော့ မတွေ့မိပါဘူး သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာကို လေ့လာကြည့်ရင်တော့ မှန်းဆလို့ရပါတယ် အခုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ တွေ့မိတော့ ကန့်သတ်တာ တားမြစ်တာလဲ လုပ်မထားဘူး လူတိုင်းလဲသိသင့်တယ် သိခွင့်ရှိတဲ့အချက်အလက်တွေမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ….
၂။ ဒုတိယသမ္မတ (၁)
၃။ ဒုတိယသမ္မတ (၂)
၁၈။ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ)
၁၉။ တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
၂၆။ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ
အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အကောင်းဘက်ကို ချီတက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် …. အကောင်းဘက်ကို ရောက် မရောက် ကတော့ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ….
အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ လူသိပ်စိတ်မ၀င်စားတာက
ဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအုပ်စုထဲက လွတ်နိုင်မယ်မထင်လို့
ဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီး စိတ်မ၀င်စားကြတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်
မနက်ဖြန် စားစရာဆန်ရှိနေဖို့ အရေးကြီးသတဲ့
ပြည်သူတွေလည်း လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကိုပဲမြင်ပြီး ရေရှည်ကို မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးထင်ရဲ့
ဒီလိုသာလုပ်နေရင် ဒီသံသရာပဲ လည်နေတော့မှာ
ကျေးဇူးပါ သိချင်နေတာ အခုမှတွေ့ရတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေကို အစိုးရအဖွဲ့ အင်္ဂါစဉ်ထဲပါမယ် မှတ်ထားတာ။ သူတို့အထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ ရဲချုပ်လိုရာထူးမျိုးတွေသည် နိုင်ငံရေးပို့စ်မဟုတ်လို့ စာအရ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သဘောပေါ့။ လက်တွေ့မှာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လက်ညွှန်၊ ဒုညွှန်လို့ ရာထူးတွေတောင် အရပ်သား ဝန်ထမ်းတွေ သူ့အရည်အချင်း လုပ်သက်အလိုက် တက်ခွင့်မရတာပဲကြည့်လေ။ တလောက အင်တာနက် သတင်းတခုမှာ ဦးသိန်းစိန်က ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌရာထူးကို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ရာထူးအဖြစ် ပြောင်းချင်တာ ဒုသမတဦးတင်အောင်မြင့်ဦး လက်မခံဘူးပြောတယ်။ အမှန်မှာ ဗဟိုဘဏ်ရာထူးသည် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးလို အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးအဆင့်ညီ ရာထူးဖြစ်ရတယ်။ အစိုးရနဲ့ သီးခြားရပ်တည်ရတယ်။ အခုတော့ သူ့ရာထူးက ညွှန်ချုပ်ရာထူး အဆင့်ပဲရှိတယ်။ ဒါနဲ့များ ဘယ်လိုလုပ် ငွေကြေးစနစ်ကို ပြင်ကြအုံးမလဲ မသိဘူး။ အတွင်းသတင်းတခု ကြားဖူးတာ စစ်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးတယောက် ယူအန်ညီလာခံလာတက်တော့ သူတို့တည်းတဲ့ဟိုတယ်မှာ မနက်စာ ဝန်ကြီးဘရိတ်ဖက်စ်အတွက် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌလုပ်သူနဲ့ ပါလာတဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တလှည့်စီ ကျော်လှော် ပြင်ဆင်ပေးရတယ်။
အခု ဘုရင် လဲ တို့ ဘုရင် နောက်တက်လာမယ့် ဘုရင် လဲတို့ ဘုရင်
ကြောက်စိတ်နဲ့ ဇွတ်မှိတ် ထောက်ခံခဲ့ရတာပဲလေ
အခုခေတ်တော့ သမ္မတ မပြောပါနဲ့
ထောက်ခံစာလေးတစ်စောင်ရဘို့ အတွက် ရပ်ကွက်စာရေးကြောက်ရ
အခုရှိတဲ့ အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့.. ကြံ့ ခိုင်ရေးက.. (ယူအက်စ်မှာဆို..GOP ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က.. ( ယူအက်စ်မှာဆို. ဒီမိုကရက် )
မကြာခင်.. ယူနီယံ(သမဂ္ဂ)တွေဖွဲ့ ခွင့်ရမယ်ထင်မိတယ်..။
ဒီချုပ်က.. အဲဒါတွေအကုန် အုပ်မိအောင် ချုပ်နိုင်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ လိုနေတယ်ထင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ဒီမိုကရက်ပါတီက.. ယူနီယံတွေရယ်..အခြေခံလူတန်းစားရယ်ကို.. ကိုယ်စားပြုတာမို့ပါ..။
ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီကတော့.. သူဌေးတွေ..လုပ်ငန်းရှင်တွေ..ငွေရှင်တွေနဲ့.. စစ်သားတွေကို.. အများအားဖြင့် ..ကိုယ်စားပြုတယ်..။
တည်ငြိမ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့။
အားကောင်းတဲ့ ပါတီဖြစ်ဖို့အတွက် လူတွေကို တကယ်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ပါတီကြီးတွေ၊ ထိရောက်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့က လည်း ပါတီကြီးတွေနဲ့ ပါတီငယ်လေးတွေကို အပြတ်အသတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မှာပါ။ တီးပါတီလို အခြားပါတီတွေလည်း ရှိချင်ရှိပါစေ။
တီးပါတီ ဆိုတာက.. ပါတီငယ်လို့ပြော၇မှာထက်..လှုပ်ရှားမှုတခုလို့ ပြောသင့်တာပဲ..။
သူက.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီအောက်မှာပဲ ရှိလို့ပါ..။
နိုင်ငံေ၇းစကားနဲ့ခွဲပြော၇ရင်.. လက်ယာစွန်းသမားတွေရဲ့ အစုအဖွဲ့ပေါ့..။
မိခင်..ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီကို.. လွှတ်တော်ခုံနေရာတွေရအောင်.. ခပ်ကြမ်းကြမ်းဝိုင်းကိုင်ပေးတဲ့သူတွေအစုလို့ ပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့…။
အခုအိုဘားမားကို.. ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းထဲမှာ.. ရွန်ပေါ၊ မစ်ရှဲဘက်ခ်မန်.. ဆာရာပေလင်(အခုထိတော့ မကြေငြာသေး)တို့က..တီးပါတီလှုပ်ရှားမှုရဲ့.. ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပါ..။ ရီပါ့ဗလစ်ကန်တွေပါပဲ..။
ယူအက်စ်လွှတ်တော်မှာ.. အဲဒီ ၂ပါတီကလွဲလို့.. ကျန်တာလွှတ်တော်ခုံထဲ..မရှိသလောက်ပါ..။
တသီးပုဂ္ဂလ( အင်ဒီပန်းဒန့်) ဆီးနိတ်မှာ ၂ယောက်ပဲရှိတယ်..။
“”ကျွန်တော် လက်ခံထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာလေးလဲ ပြောချင်ပါတယ် နိုင်ငံ့အရေးအရာတွေကိုလုပ်တာ နိုင်ငံရေးပါ ကျောင်းသားက စာတတ်အောင်သင်မယ် ဆရာဝန်ကလူနာတွေကိုဆေးကုပေးမယ် စာရေးဆရာက အသိပညာဗဟုသုတတွေ တွေ ဖြန့်ဝေမယ် ဒါနိုင်ငံရေး လုပ်တာပါပဲ အခု ဒီပို့စ်လေးတင်လိုက်တာလဲ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်းကလူတွေ သိသင့်သိထိုက်တာ ဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်လို့ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးပါပဲ…””
nozomi ရေ ဒီနေရာလေးကိုထောက်ခံပါတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်။အမြင်ချင်းတူလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။
ကျေးဇူးပဲဗျာ သိချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ၀န်ကြီးချုပ် ဥပမာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ထက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမြင့်သွားတော့ အရင်သူတိုင်းမှူးဘ၀က သူ့ လက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူတချို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေဖြစ်သွားတာတွေ့ ရတယ် အဲဒီလိုဆိုတော့ အရင်သူ့ လက်အောက်ကလူကို အခု သူကပြန်ပြီးလေးလေးစားစားဆက်ဆံနေရတော့မှာပေါ့
ီဦးသန်းရွှေက ဒါမှူိး ကြွမ်း တာ။
ီကျေးဇူးပဲဗျာ သိချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ၀န်ကြီးချုပ် ဥပမာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ထက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမြင့်သွားတော့ အရင်သူတိုင်းမှူးဘ၀က သူ့ လက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူတချို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေဖြစ်သွားတာတွေ့ ရတယ် အဲဒီလိုဆိုတော့ အရင်သူ့ လက်အောက်ကလူကို အခု သူကပြန်ပြီးလေးလေးစားစားဆက်ဆံနေရတော့မှာပေါ့
ပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီးမှာ
ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရကြောင်း
အခုအခြေအနေက ပန်ပန်ပြောသလို “ဒီလိုသာလုပ်နေရင် ဒီသံသရာပဲ လည်နေတော့မှာ ” ဖြစ်နေတယ် အဲဒီ သံသရာ ကို ဖြတ်ဘို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်
အောက်က မန်းထားတာတွေက အပေါ်က ပို့စ်ထက်တောင် ပိုကောင်းနေတယ်၊ မသိသေးတာတွေလဲ သိရ
သူ့ကို GOP က အခုအချိန်မှာ ပူးပေါင်းထားတာပါ။
Tea Party Movement ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။
The Tea Party movement (TPM) is political movement that is generally recognized as conservative and libertarian,and has sponsored protests and supported political candidates since 2009. It endorses reduced government spending, opposition to taxation in varying degrees, reduction of the national debt and federal budget deficit, and adherence to an originalist interpretation of the United States Constitution.
The name “Tea Party” isareference to the Boston Tea Party,aprotest by colonists who objected toaBritish tax on tea in 1773 and demonstrated by dumping British tea taken from docked ships into the harbor. Some commentators have referred to the Tea in “Tea Party” as the backronym “Taxed Enough Already”.
ကျမ နိုင်ငံရေးကို သိပ်နားမလည်ပေမဲ့ nozomi ရဲ့ အတွေးနဲ့ စာစုကို သဘောကျတယ် ။ မဝေပြောတာထောက်ခံတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းဖို့ က အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားသာမက ကျမတို့ နိုင်ငံသားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ခိုင်ခံ့ပြီးလှပသေသပ်တဲ့ နေချင့်စဖွယ် အိမ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးရော အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာပါ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
သူကြီးရဲ့ ဝေဖန်ချက်ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ သူကြီးကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အမြင်ကျယ်ပြီး အတွေးကောင်းသလိုပဲ။ (နိုင်ငံရေးပဲ ပြောတာနော် )
ကြံ့ဖွံ့က သမတ၊ ပြည်ထဲရေးရာထူးတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မထားရင်ပေါ့..။
စစ်တပ်ကလည်း ဘယ်သူ့ရဲ့မဲမှမလိုဘဲ ခပ်တည်တည် အစိတ်သား (၂၅%)ယူမထားရင်ပေါ့ဗျာ..။
အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အကောင်းဘက်ကို ချီတက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် …. အကောင်းဘက်ကို ရောက် မရောက် ကတော့ (နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့်)နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ….
လက်ရှိဦးသန်းရွှေရဲ့ရာထူးကတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကတော့ တပ်ချုပ်ကြီးအငြိမ်းစား ၊ နအဖ ဥက္ကဌကြီး အငြိမ်းစား ၊ နောက်ကွယ်မှာတော့ သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ကြိုးကိုင်သူ ။ သိတာလေးပြောတာနော် ။ မှားချင်လဲမှားမှာပေါ့ ။
ဒီနေ.မြန်မာ~ဗီယက်နမ် ပွဲရှိတယ်ဗျ သွားကြည်.ကြည်.ကြပါအုံးလား
@ zawlin1 – လေးဘက်သွား ဒီမိုကရေစီဘ၀ပဲ ရှိသေးတာမို့ ဘေးကရော ကာယကံရှင်တွေ ပါ ဒီလိုတွေး ဒီလိုမြင်ကြတယ် ထင်ပါတယ် ၊ အတွေ့အကြုံများပြီး ရင့်ကျက်သွားတဲ့ တစ်နေ့ ဒီကိစ္စတွေက ပြေလည်သွားမှာပါ
ဟီလာရီ အရင် က first lady အဲဒီအချိန် အိုဘားမား ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင် မသိဘူး အခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သူ့တာဝန် သူကျေအောင် လုပ်တယ် ငါက အရင်က သမ္မတကတော် အခု သူများ သမ္မတ လက်အောက်မှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး လုပ်ရမှာ ရှက်စရာလို့တွေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး
အစ္စရေး မှာ တစ်ယောက်ထဲက ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လိုက် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဖြစ်လိုက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လိုက် ငါ ရာထူးနိမ့်သွားလို့ ရှက်စရာလို့ သူတို့ မမြင်တာ သေချာပါတယ်
Thanlwinoo ကတော့ အခု အခြေအနေကို တော်တော် မကျေမနပ်ဖြစ်နေပုံရတယ်
ကြိုက်ခြင်း၊ မကြိုက်ခြင်းကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ ၊ မကြိုက်ရုံပဲဆိုရင်တော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ ဆိုရုံနဲ့ ရပြီ ဒါပေမဲ့ မကြိုက်တာတွေက ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲ ၊
ဒီအခြေအနေတွေက မတရားဘူးထင်လို့ ပြောင်းချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပါဝင်၊လူထုကို စည်းရုံး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ့်လူဖြစ်အောင် အရင်လုပ် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို အများသဘောကျရင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလဲ ကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲ အဲဒီကျမှ ပြင်၊ဖြည့်၊ဖြုတ် လုပ်ကြပေါ့ ဒါက မကြိုက်တဲ့ လူတွေအတွက် ကြိုက်တဲ့ လူတွေဘက်ကလဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပြီး ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် စည်းရုံပေါ့